ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: Auto Change G-Talk Photos
Auto Change G-Talk Photos
အခု ကျနော် ... Gtalk နဲ့ ဆိုင် တဲ့ ဆော့ဝဲ လေးတစ်ခုကိုပြော ပြ ပမယ် .
အဲ့ဒီ ဆော့ဝဲ ဟာ ... Gtalk လိုမျိုးပဲအသုံးပြုရတာပါ.
ဒါပေမဲ့ ထူးခြားချက်တွေကတော့ ....
မိမိGTalk မှဓာတ်ပုံများကို ... ... ...ကိုယ်ကြိုက်ရာ ဓာတ်ပုံရွေးပြီးAuto ပြောင်းနေပါပဲ။
ဘာမှ လဲ မခက်ပါဘူး ... အောက်မှာရှိတဲ့ Download Link လေးကို ဒေါင်းပြီး
Run လိုက်ရင် ရပါပြီ၊
Run ပြီးရင်တော့ Gtalk Shell Icon လေးကိုဖွင့်ပြီး.... အောက်က ပုံလေးတွေအတိုင်း လုပ်လိုက်နော်.
1.Shell ကိုနှိပ်လိုက်ပါ. 2.ပြီးရင် Option ကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါ.
4.မိမိဓာတ်ပုံရဲ့ ဖိုင်အမျိုးအစားကို ရွေးပါ.ပြီးရင် ဓာတ်ပုံရွေးပါ.(ဓာတ်ပုံရွေးရာတွင် တစ်ခါထဲ မိမိရွေးမည့် ဓာတ်ပုံများကို
Ctrl နဲ့တွဲနှိပ်ပြီး ဓာတ်ပုံကို ရွေးပါ.ပြီးရင် OPen လိုက်ပါ.
အခုလိုအားလုံး လုပ်ပြီးရင်ဥkကိုနှပိပါ.ဒါဆို ရပါပြီ..မိမိရွေး ထားတဲ့
ဓာတ်ပုံတွေဟာ ..Auto aပြာင်းနေတာ ကိုတွေ့ရပါ လိမ့်မယ်.
Download Link >> GTALK SHELL
Download Link >> Gtalk Shell (New Link) (ကျနော် Download Link နောက် တစ်ခု ထပ်တင်ပေးထားတာပါ.. ပထမ Linkက အဆင်မပြေ ကြလို့ပါ.)
ရေးသားသူပြုစုသူ ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်-ဘားအံမြေ အချိန် 5:17 AM